Matipi Ekutenga Inotendeseka Yekutakura Mawiricheya
Izvo zvinodikanwa zvevarwere munzvimbo yekurapa sechipatara zvinogona kusiyana zvakanyanya. Kana iwe usingakwanise kufamba nzendo refu kana kumira kwenguva yakareba nekuda kwenjodzi kana kurwara, unozokwanisa kuwana chengetedzo chaiyo yezvaunoda iwe uri muchipatara.
Mawiricheya anoshandiswa nemakiriniki ekurapa aya kana ekurapa emumuviri kutakura varwere zvakanaka uye zvakachengeteka kuenda nekubva kumisangano mukati meiyo nzvimbo. Kwete yose Mawiricheya zvakasikwa zvakaenzana, saka zvakakosha kusarudza kurudyi wiricheya kune zvinodiwa nemurwere.
senga Mawiricheya Yakagadzirirwa Vanochengeta
Nesarudzo hombe yezvinhu zvekurapa pamusika, zvinogona kukurisa kuva nekamu kuburikidza nemazana esarudzo kusarudza mudziyo wakakodzera pane zvaunoda. Kuti uwane yakanakira dhizaini yeyako yekurapa nzvimbo, iwe unozofanira kutanga waona izvo zvido zveako nzvimbo.
chero wiricheya munzvimbo yekurapa inofanirwa kuve yakachengeteka uye yakagadzikana kutanga. Izvo zvinofanirwa zvakare kuve nyore kune vanochengeta, varindiri uye mune dzimwe nguva varwere kufambisa iyo wiricheya. The wiricheya inofanirwawo kukwana zvakanaka pamwe nenzvimbo dzekurapa 'nzvimbo inoda.
Rudzi runotakurika rwe wiricheya yakanaka pakufambisa varwere padhuze vanogona kuve nehurema kwenguva pfupi kana zvachose nekuda kwechimiro chebariatric kana pamwe yavo kufamba inorambidzwa nekuda kwekurwara, kurapwa kana kurapwa. Ukangonzwisisa izvo zvinodiwa nenzvimbo yako, izvo chete zvinodiwa zvinozotengwa uye iwe unozochengeta mari pakupedzisira.
Usati waita yako yekupedzisira wiricheya kutenga sarudzo, zvakare funga nezve kuchengetedzeka kwevashandi nevarwere. Nguva dzose Mawiricheya uve nenhamba yekuchengetedza maficha zvikanganiso.
Nguva dzose funga nezve braking system yeiyo wiricheya sezvo apa ndipo panowanikwa chimwe chezvikanganiso zvikuru. Ichi chakakosha kuchengetedza chinhu uye kukanganisa apa kunogona kukonzera kukuvadza kumurwere.
Mimwe mienzaniso mitsva ye wiricheya vane otomatiki akamedura hurongwa. Iyo brake system inoona kuti iyo wiricheya haizoumbure yega sezvo ichingoerekana yaiswa kana muchengeti kana mushandi aburitsa mubato wekubata. Murwere anogona zvakare kubuda zvakachengeteka kubva mu wiricheya Pasina kunetsekana kuti inogona kubva pasi pavo.
Kugadzikana nekusimba kunofanirwa kutariswa muchisarudzo chekupedzisira. Nguva dzose Mawiricheya vane hupenyu hupfupi uye mazhinji acho anobatsira chete kweanopfuura makore matatu. Gara uchitenga wiricheya kubva kumugadziri anovimbwa uye anozivikanwa uye uve nechokwadi chekuti inouya newarandi.